डा. केसीको गिरफ्तारीको विरोध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले डा. गोविन्द केसीको गिरफ्तारीको विरोध गरेको छ । न्याय प्रणालीको स्वच्छता र निष्पक्षतामा जोड दिएका कारणले डा. केसीलाई गिरफ्तार गर्नु सही नहुने राजमोको भनाइ छ । राजमोले पौष २५ गते नै एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै डा. केसीको गिरफ्तारीको विरोध गरेको हो ।
चिकित्सा क्ष्ँेत्रमा सुधारका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष डा. गोविन्द केसी पछिल्लो समयमा प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको न्यायिक निस्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनको राजीनामाको माग समेत थपेर २४ पौषदेखि चौधौँ अनसनमा बस्नु भएको थियो । डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा अदालतको मानहानी भएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा २४ पौषको मध्यराती डा. केसीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । डा. केसीको गिरफ्तारीको विरुद्धमा २५ पौषमा माइतीघर मण्डला लगायत देशैभरि विशाल प्रदर्शन समेत भएका थिए । पौष २५ गते डा. केसीले सर्वोच्च अदालतमा बयान दिनु भएको थियो । त्यसमाथि बहस पौष २६ गते हुने भएको छ ।
राजमो अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीद्वारा जारी उक्त प्रेस वक्तव्यमा डा. केसीको शीघ्र रिहाइको माग गरिएको छ । वक्तव्यमा पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा बिदा दिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरिएको छ भने हिमाली भेगका जनतालाई पनि जाडोबाट बचाउन राहत सामग्री बाँड्नु पर्ने आवश्यतामा जोड दिइएको छ ।
अध्यक्ष केसीद्वारा जारी उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “१. डा. गोविन्द केसीको गिरफ्तारीप्रति हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षित भएको छ । संविधानले नागरिकहरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसका साथै देशको न्याय प्रणाली स्वच्छ र निष्पक्ष प्रकारको होस् भनेर आवाज उठाउनु पनि सबै नागरिकहरूको अधिकारभित्रको कुरा हो । त्यो अवस्थामा नागरिकलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेको तथा न्याय प्रणालीको स्वच्छता र निष्पक्षतामा जोड दिएको कारणले डा. केसीलाई गिरफ्तार गर्नु सही भएको छैन ।
उनको गिरफ्तारीका लागि पनि जुन तरिका अपनाइयो, त्यो न्यायसङ्गत रहेको छैन । मानहानीका मुद्दाहरूमा प्रायशः अदालतमा हाजिर हुनका लागि पुर्जी काट्ने गरेका उदाहरणहरू छन् । त्यसको विपरीत उनलाई पक्रेर नै हाजिर गराउने आदेश दिइयो । उनलाई गिरफ्तार गर्दा पनि कुनै अपराधीलाई जस्तै रातको समयमा गिरफ्तार गरियो । उनीसित व्यवहार गर्दा कानुनको न्यायिक संयमताको पनि पालना गरेको देखिएन । हाम्रो पार्टीले उनीप्रतिको त्यस प्रकारको व्यवहारको विरोध गर्दै डा. केसीको शीघ्र रिहाइको माग गर्दछ ।
२.सरकारले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको त्यो निर्णयलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ । नेपालको एकीकरणमा पृथ्वी नारायण शाहको ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ । यदि उनले नेपालको एकीकरण नगरेको भए हाम्रो देश ब्रिटिस साम्राज्यवादको उपनिवेश बन्न सक्ने थियो । उनको ऐतिहासिक भूमिकाका कारणले नै नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहन सक्यो । त्यस कारण त्यो अवस्थामा हामीले पृथ्वी नारायण शाहको उच्च मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ ।
३.सरकारले तराईका कतिपय जिल्लाहरूमा चलेको शितलहरका कारण जाडोबाट बच्नका लागि राहत सामग्री बाँड्ने निर्णय गरेको छ । त्यसलाई हामीले सही ठान्दछौँ र स्वागत गर्दछौँ । हिमाली जिल्लाहरूमा पनि त्यहाँका जनता हिउँले कठाङ्ग्रिएका छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन वा सरकारले उपेक्षा गरेको छ । सरकारको त्यस प्रकारको व्यवहारको आलोचना गर्दै हाम्रो पार्टीले हिमाली भेगका जनतालाई पनि जाडोबाट बच्नका लागि राहत सामग्री बाड्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
४.जाजरकोट जिल्लामा ठण्डीका कारणले इन्फ्ल्युइन्जाको प्रकोप बढेको छ । कतिपयको मृत्यु समेत भएको छ । उक्त इन्फ्ल्युइन्जाको प्रकोप तत्काल नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न हाम्रो पार्टीले सरकारसँग माग गर्दछ ।”
नेकपा (मसाल) केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न
प्रदेश राजधानी आयोगको सिफारिसमा तोक्नु उचित ः राजमो
अत्यधिक चिसोले जनजीवन कष्टकर
रक्तिमले देशव्यापी सांस्कृतिक प्रशिक्षण शिविर चलाउने
छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
किरात विशेष कार्यक्रम सम्पन्न
कतार नेपाली एकता समाज पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनतिर
अस्थायी स्थान तोक्ने तयारी
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चैत्रमा
पर्वत र गुल्मी जोड्न कालीगण्डीमा पुल उद्घाटन
रसायन प्रयोग न्यूनीकरण गर्न माग
रहेनन् दल बहादुर भण्डारी
जापान नेपाली एकता समाजको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सांस्कृतिक क्रान्ति ः मोहन विक्रम सिंह